iPhone 5s - iPhone Nhau | IPhone nhau
El iPhone 5s ndiyo Chizvarwa chechinomwe iPhoneSezvo makore maviri ega ega iyo "S" modhi iri nani shanduro yemhando yapfuura. Mune ino kesi inochengetedza dhizaini yeiyo iPhone 5 asi nekuchinja mavara, iyo nhema mhando inova nzvimbo grey (kudzivirira kuderera nekufamba kwenguva), iyo chena modhi inosara uye nyowani iPhone inoonekwa muvara dorado.
Yekutanga Smartphone ine Zvivakwa zve64-bit, processor yayo yeA7 inovandudza mashandiro pasina kudzikisira kuzvitonga; zvakare inosanganisira a new koprocessor, iyo M7, inokwanisa kuyera uye kutonga kwese kufamba kwedu. Iyo 5s zvakare iri yekutanga Smartphone ine chigunwe chigunwe sensor yekuvhura, yakanakisa iPhone Apple yagadzira kusvika zvino.
IPhone 5s inosanganisira kamera inovandudza, anononoka kufamba mavhidhiyo, kuputika modhi uye yakavandudzwa kupenya ine ma LED maviri anovandudza toni yemifananidzo yemanheru.
Chidzitiro chayo chiri 4 inches, ukobvu hwayo 0,76 masentimita uye huremu hwayo hwemagiramu 112 chete, uye ese akapedzwa nesimbi, isina kana purasitiki.
Uye izvi zvese zvichiperekedzwa ne nyowani yekushandisa system iOS 7Kwenguva yekutanga, Apple yatora shanduko yakazara nekugadzirisa patsva sisitimu yayo kubva pakutanga, iine zviratidzo zviri nyore uye kurasikirwa neicho chaicho uye chakaratidzika chitarisiko mukutsvaga dhizaini dhizaini.
Pano iwe unogona kuona yedu yakazara iPhone 5s ongororo.
Vhidhiyo ongororo yeiyo iPhone 5s
Uye kupedzisa kuona dzese nhau uye iPhone 5s mafichaHeino ongororo yevhidhiyo inoitwa neyedu yekugadzirisa timu. Isu taive ivo kutanga kuva iyo iPhone 5s muSpain uye yekutanga kukuudza zvaive zvakaita.
Nhau nezve iyo iPhone 5s
Pazasi isu tinokupa iwe dzese nhau nezve ma5s kuti iwe ugare uchiziva izvo zvinotenderera pane ino Apple terminal:
Mifananidzo ye graphite iPhone 5s prototype yakaburitswa
Kazhinji, prototypes emidziyo inozogadzirwa uye iyo inosara muzvirongwa chete, inowanzo kuparadzwa….
Mushure memakakatanwa akagadzirwa neFBI neApple yekambani yeCupertino-based kuvhura iyo ...
Mushure memwedzi yakawanda yerunyerekupe, kudonha uye kusimbisa zvisiri pamutemo, Apple yakaratidza iyo iPhone SE nezuro masikati, chii ...
Iyo iPhone 5s inonyangarika kubva kuApple catalog mushure meiyo iPhone SE
kubudikidza Juan Colilla inoita 6 makore .
Pakupedzisira zita rakasimbiswa, iPhone SE, isu tinofungidzira kuti kubva kuCupertino vakaisarudzira iyo Special Edition uye iri ...
Apple inobvisa hafu yemutengo we iPhone 5s muIndia
Pakati penyika apo Apple iri kuwedzera nekukurumidza, kunze kweChina tinowanawo India, uko kunyangwe ...
Iyo iPhone 6s uye iyo iPhone 6s Plus, anga achitengeswa kubva Chishanu chapfuura 25 cha…
Nhau dzakanaka nedzakaipa. Ini ndichatanga neakanaka kutanga, sezvo chiri icho chikonzero chikuru chechinyorwa chino. Uye zvakadii ne ...
Maitiro ekuziva kana yako iPhone 6 iine MLC kana TLC ndangariro
kubudikidza Nacho inoita 8 makore .
Mimwe mienzaniso ye iPhone 6 uye iPhone 6 Plus ine masimba e64 GB uye 128 GB ane matambudziko ...
Iko kudhura kwezvinhu zveiyo iPhone 6 zvakapoterera mazana maviri emadhora
Apple inogona kushandisa pakati pe $ 200 ne $ 247 kugadzira chimwe nechimwe cheiyo iPhone 6 kana pakati pe $ 216 ...
Iyo iPhone 5s uye iPhone 5c inodonha mumutengo
Isu tatoziva mitengo yeiyo iPhone 6 uye iPhone 6 Plus mune yayo yemahara mode uye muSpain, isina ...